mushaTHE WORLDzvekuEurope30 GreeceVashandi ve Njanji Vanorwa Girisi
Vashandi ve Njanji Vanorwa Girisi
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 30 Greece, zvekuEurope, THE WORLD, Railway, GENERAL 0
vashandi vezvitima vanorova mugraze
Kupesana neNew Democracy hurumende 'Kukura Mutemo', vashandi vezvitima muAthens vakazivisa kuti vacharova 24 neawa.
Vashandi vepasi pevhu, tramu, bhazi uye trolleybus muAthens vakazivisa kuti vachapinda musarudzo yeawa-24-kuratidzira chirongwa cheNew Democracy (ND) chehurumende 'Kukura Mutemo'. Kurwiswa kuchaitika Chipiri neChipissia-Piraeus magetsi emumaguta njanji (ISAP) pamwe neguta guru rekutakura vanhu.
Nezuva rimwe chete iro, zviyero nezvikepe pachiteshi zvichakwidzirwazve, uye vashandi vezvikepe havasi kuzoshanda kubva ku6 neChipiri kuenda ku6 neChitatu.
Vakuru vechikepe vechiGreek munguva pfupi yadarika vakazivisa kuti vacharova. (haber.sol)
Vashandi veFrance Vanofambisa Kugadzirira 36 Daily Strike 02 / 04 / 2018 MuFrance, vashandi venyika yose SNCF 3 vanotanga basa ravo rekuvhara basa pamwedzi weMuvhuro. Vakuru vakuru veC3 vakanyevera vagari vomuFrance kuti 77% yevanyori vemashizha vaizobatana nechisungo musi weChipiri, vachitaura kuti motokari ichavhiringidzwa zvakanyanya. Munharaunda yezvinonzi "Railway Challenge", vashandi vesangano vachaita basa rezuva re 3-kurega kuita pane kwemwedzi inotevera ye36. Vashandirwi veSNCF vari kutaurira Mutungamiriri weEmmanuel Macron musungo wekutsvaga nzira yekutengeserana kwezvitima zveFrance. Macron anodawo kuchinja unhu hwakakosha hwevashandi vezvitima nemutemo. Icho basa chaiyo chaiyo, nevashandi vezvitima vanoshanda usiku uye vhiki dzevhiki vachienda mberi.
Kutakura Pakati Pebasa Vagadzirire Kugadzirira Kurwisa 08 / 05 / 2019 Kutengesa Chikamu cheBatting Bargaining pakati peTareji-İş Union, iyo yakarongeka muPaki uye sangano reSene-mushandirwi, rakadziviswa. Iyo Isu tine nhengo dzine chiuru muTitrustation Park. Kana zvatinoda zvikasagamuchirwa, ticharova. " VANOFANIRA KUDZIDZISWA Mishaire Yebazi Yebazi Adapazari Railway-Business Union Kocaeli Transportation Park Mumiririri Wemabasa Anoshanda Halit Turan, sangano revashandi ve Local-Sen vakati havagone kuchinja. Turan yakapindura mibvunzo yepepanhau redu ndokuti: "Zvatinoda ndezvechokwadi uye munhu. Kutakura Tine nhengo dzine chiuru muPaki. Mishonga yedu inowanikwa muhomwe, kureva 2020 TL. Pamwe pamwe nedzimwe ruzivo rwemagariro evanhu, nhamba yose ye2 zviuru 750 inosvika TL. Zvatinoda ndezvokuti misha yedu ndeye 3 ...
Vashandi Vecheji Vanorova muFrance 13 / 06 / 2013 Vashandi Vecheji Vanorova muFrance Vashandi vanopesana nehurongwa hwehurumende yehutongi hwevanhu kuti vabatane makambani akasiyana-siyana emigwagwa munyika. Pamusana pekutsvaga, kutakurwa kwepamusoro kwezvitima kunotarisirwa kuva akaoma mitezo munyika yose. The National Railway yakashuma kuti 10 chete inoshumira kubva kuT4 fast train mangwana nekuda kwekurohwa. Pamusana pekutsvaga, ndege dzeFrance dziri pakati peItaly neSwitzerland dzichadziviswa nehafu. Nhandare haina kutarisirwa kuti iite hurukuro yepamusasa yechitima kubva kuFrance kusvika kuBelgium neEngland. Pamusana pekutsvaga, usiku tereiniti pakati peFrance neSpain ichabviswa.
Vashandi Vecheji muFrance Vakashanyira 01 / 06 / 2016 Greve De Workers Railway Vanotanga muFrance: basa kuchinja mutemo kuFrance akaronga kuratidzira achirwisa kuchiteshi vashandi uye nyika kubva nhasi kuparadzira zvavo ranwa zvakare kupinda. In France, kuchinja basa mutemo uye chakarongwa kuti rikanganise nyika kubva nhasi kuparadzira mukuru wavanozvisunga kuti njanji vashandi uyewo kupinda. Nokuda mafuta kuperevedza munyika vachienda wavanozvisunga noruoko vashandi Refinery iye vanoda vanhu njanji chokufambisa ichangopfuura mavhiki. Nharo dzakatanga kupikisana nekushandurwa kwakaitwa nehurumende mumutemo webasa yakanga yatopararira kune yekutakura. Kubatanidzwa kwevashandi vezvitima vakaremara kuendesa munyika. Migwagwa yakawanda munzvimbo iyo yakaderera kufamba. Air France vanofambisa ndege
Vashandi ve Njanji Vanorova muSpain 01 / 08 / 2019 KuSpain, 700 kudzingwa kwechitima kwakabviswa nekuda kweyekurohwa kwakadanwa neGeneral Labour Confederation (CGT) kune vanobatana nevashandi vezvitima.Masangano aya akafunga kurova mushure mekutaurirana pakati peSpain Railways (RENFE) neGeneral Labor Confederation (CGT) haina kuzopera. Sangano revashandi, reGeneral Labour Confederation (CGT) riri kutsvaga kugadziriswa kwezvinhu zvakaita seyakaderera bhonasi, kubuda uye kushomeka kwevashandi. Izvo zvakaziviswa kuti 12.00, imwe yevatakuri vekutakura zvinhu, vafambi, vafambi uye yakakwira munyika, yakadzimwa mushure mekutongwa kwekutora kwakatorwa nemubatanidzwa wevashandi pakati pe16.00 ne20.00 uye pakati pe24.00 ne700. General Bhizinesi Confederation mubatanidzwa (CGT)…
Göztepe Ümraniye Metro Line Mabasa Anotangazve
Vashandi veFrance Vanofambisa Kugadzirira 36 Daily Strike
Kutakura Pakati Pebasa Vagadzirire Kugadzirira Kurwisa
Vashandi Vecheji Vanorova muFrance
Vashandi Vecheji muFrance Vakashanyira
Vashandi ve Njanji Vanorova muSpain
Vashandi vechiDutch Railway vanogadzirira gomba
İZBAN Vashandi Vanoenderera KuGrive
Nhasi munhoroondo: 14 September 1908 Vashandi veAnatolian uye Oriental Railway vakaenderera mberi ...
Nhasi munhoroondo: 14 September 1908 Vashandi veAnclelia neAsia Railway vakapinda.
Vashandi vecheji yeBelgium vakaenda kunhandare